समाचार Archives - Page4of 312 - कृषि पत्रिका
खलङ्गा। जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका–५ का बिष्णु धिताल जिल्लाकै नमुना तथा व्यावसायिक भैँसीपालक किसानका रुपमा परिचित छन् । भैँसीपालन व्यावसाय शुरु गरेका उहाँले अहिले नामसँगै दाम कमाउँदै आएका छन् । व्यावसायिक भैँसी पालनबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आएका उहाँसँग अहिले जिल्लाका अन्य पशुपालन कृषकले समेत सुझाव र सल्लाह लिन आउने गरेका छन् । उहाँले २०५२ सालदेखि एक […]
नारायणपुर। राम्रो रोजगारी र आकर्षक कमाइका लागि विदेश जाने होड चलिरहेका बेला तुलसीपुरका युवा भने व्यवसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । मेहनतअनुसार घरमै बसेर लाखौ रुपैयाँ कमाउन सकिने भएपछि यहाँका युवामा तरकारी खेतीप्रति मोह जागेको हो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ बनकट्टीका चार्टर एकाउन्टेन्टद्वय घनश्याम सापकोटा र सन्तोष विष्ट तथा जमिन राना र कान्तुराम खनाल […]
जडीबुटी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न निः शुल्क विरुवा
इलाम। किसानलाई औषधिजन्य जडीबुटीको खेतीमा प्रोत्साहन एवम् प्रवद्र्धन गर्न वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रले जडीबुटीका विरुवा निः शुल्क वितरण गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय औषधिजन्य वनस्पतिको खपत बढी रहेका बेला केन्द्रले विरुवा वितरण गर्न लागेको हो । केन्द्रले ७० हजार औषधिजन्य वनस्पति र ३० हजार किवीको विरुवा वितरण गर्ने जनाएको छ । केन्द्रका नर्सरीमा अहिले एक […]
गुर्जोको रस कोरोना विरुद्ध अचूक ओखती
तनहुँ। कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढेसँगै तनहुँ जिल्लामा गुर्जो सेवनप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छ । रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि गुर्जो सेवनप्रति आकर्षण बढेको हो । कोरोनाको जोखिम बढेपछि गुर्जोको रस नियमित सेवन गर्न थालेको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ दुलेगौडाका एकनारायण भण्डारीले बताउनुभयो । कोरोना जोखिम नदेखिदाँसम्म गुर्जेको वास्ता नभएपनि आजकल परिवारले नै नियमित सेवन गर्ने गरेको […]
बिचौलियाको मारमा केरा उत्पादक किसान
चितवन। पोखराकी सुशीला केसी अधिकारीले चितवनको आफ्नो बारीको केरा कोसाको रु. तीन हाराहारीमा बिक्री गर्नुहुन्छ तर स्थानीय बजारमा आफूले भने प्रतिकोसा रु. १० सम्ममा किन्ने गर्नुभएको छ । उहाँ मात्र होइन देशभरका किसान र उपभोक्ता बिचौलियाको मारमा छन् । अधिकारीले गुनासो गर्नुभयो, “बिचौलियाको यो मनोमानीको विषयमा तपाइँहरुले कलम चलाइदिनुपर्यो ।” आफूले सस्तोमा बिक्री गर्दा उपभोक्ताले […]
लक्ष्मण बिसि आइतबार ०४ असोज, २०७७
फलेवास। पहिरोको कारण अवरुद्ध सडक समयमै सुचारु नहुदा पर्वतको फलेवासका किसानहरुले उत्पादन गरेको ७ सय २० लिटर दुध सडकमा पोखेका छन् । नगरको वडा नम्बर ६ देविस्थानमा संचालित कृष्णगण्डकी दुग्ध सहकारी संस्थामा संकलन गरिएको दुध बजार पु¥याउन नसकेर शुक्रबार किसानहरुले पोख्न बाध्य भएका हुन । दुई दिनमा बजारमा पठाउनु पर्ने दुध ५ दिनसम्म पनि बजारमा […]
दाङ। दाङको गढवा गाउँपालिका­ ७ मोतीपुरका चोकनाथ चौधरीले उत्पादन गरेको मकै विक्री हुन सकेको छैन । चौधरीले करीब एक विगाहा जमीनमा मकै खेती गरेका छन् । गत वैैशाख महीनामा तयार भएको बसन्ते मकै र हालै तयार भएको वर्षे मकै पनि विक्री नभएको उनले बताए । मकै विक्री गरेर भएको आम्दानीले घर खर्च चलाउने चौधरीलाई विक्री […]